Paras Shah एकाबिहानै मन्दिर पुग्दा प्रहरी नै प्रहरी : ब'न्दु पड्ए'कार सुरु गरियो पुजा Indra Jatra (भिडियो हेर्नुहोस) - Onlines Time
Paras Shah एकाबिहानै मन्दिर पुग्दा प्रहरी नै प्रहरी : ब’न्दु पड्ए’कार सुरु गरियो पुजा Indra Jatra (भिडियो हेर्नुहोस)
September 18, 2021 September 18, 2021 by onlinestime
पछिल्लो समय टिकटक बाट धेरै राम्रा प्रतिभाहरु बाहिर आएकाछन्, राम्रो प्रतिभा भएका प्रतिभावान प्रतिभाहरु उचित ठाउँ, स्टेज नपाएर बसिरहेको अवस्थामा टिकटकमा भिडियो बनाएर आफुमा भएको प्रतिभा देखाइरहेकाछन् । हेमराजले पनि यो महामारीमा घर आएकोे बेला टिकटकमा भिडियो हाल्न सुरु गरे । पहिलो भिडियो लाई तेति दर्शकले नहेरेपनि बिस्तारै हेमराजका भिडियोहरु रुचाईन थाले । उनले बनाउने प्रायः भिडियोहरुले समाजमा केही राम्रो सन्देश दिईरहेको हुन्छन् ।
Prev१२ वर्षे नेहारीकाको यो आवाज सुन्नुहोस् , सा.रे.ग.म ले किन दियो यति सानी नानीलाई धोका ? Neharika (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextभेरी नदीमा हा’म फाल्नु अघि १२ चोटी फोन गर्ने को हो ? खुल्यो ड-रलाग्दो रह-स्य हेर्नुस ( भिडियो हेर्नुहोस)